AMPANDEHANO NY YOUTUBE AMIN'NY ALÀLAN'NY YOUTUBE.COM/ACTIVATE (2021) - MALEMY
YouTube no sehatra ho an'ny ankamaroan'ny olona hijerena horonantsary ankehitriny. Na te-hijery lesona fampahafantarana, na sarimihetsika, na andian-tranonkala mihitsy aza ianao dia manana izany ny YouTube, ka noho izany dia io no famoahana horonantsary malaza indrindra sy tranokala streaming hatramin'ny daty.
Na dia azonao atao aza ny mijery YouTube amin'ny finday avo lenta rehetra raha mbola misy ny fanohanana horonan-tsary sy ny fifandraisana amin'ny Internet ary koa amin'ny solosaina manana mpitety mpanohana misy fifandraisana Internet, ny mijery YouTube amin'ny fahitalavitra dia lafo be. Tombontsoa ho an'ny rehetra ny fanohanan'ny YouTube amin'ny fahitalavitra mahira-tsaina.
Na dia tsy manana fahitalavitra misy OS android na fahitalavitra marani-tsaina aza ianao dia misy fomba maro hijerena YouTube amin'ny fahitalavitrao. Na dia mampifandray ny fahitalavitrao amin'ny solosainao aza ny safidy mazava ho azy, dia mety ho gaga ianao amin'ny fahafantarana fa afaka mampifandray an'i Roku, Kodi, Xbox One na PlayStation (PS3 ianao na avy eo) handefasana horonantsary YouTube eo amin'ny fahitalavitrao.
Mety hanontany tena ianao hoe ahoana no hidiranao amin'ny kaontinao Google amin'ireo fitaovana ireo hahazoana ny fantsona sy ny lisitry ny lisitry ny lisitry anao? Eo no misy ny youtube.com/activate. Io dia mamela ny fampiatoana ny kaontinao YouTube amin'ny mpilalao media na console izay manohana an'ity endri-javatra ity ary mampihena ny olana amin'ny fangatahana fidirana amin'ny kaonty Google.
Fa ahoana no fampiasanao azy? Andao hojerentsika.
tsy nifankahazo tao anaty loop vaovao farany
Ahoana ny fomba hampiasana ny YouTube amin'ny alàlan'ny youtube.com/activate
Fomba 1: ampandehanana ny YouTube amin'ny Roku
Fomba 2: Ampandehano ny YouTube amin'ny fahitalavitra Samsung Smart
Fomba 3: Ampandehano ny YouTube ao amin'ny Kodi
Fomba 4: Ampandehano ny YouTube amin'ny Apple TV
Fomba 5: Ampandehano ny YouTube amin'ny Xbox One ary koa Xbox 360
Fomba 6: Ampandehano ny YouTube amin'ny Amazon Firestick
Fomba 7: ampandehano ny YouTube amin'ny PlayStation
Fomba 8: Ampandehano ny YouTube amin'ny fahitalavitra mahira-tsaina
Fomba 9: Ampiasao ny Chromecast handefasana YouTube amin'ny fahitalavitra
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hampahafantatra ny mpamaky anay araka izay azonay atao momba ny dingana azonao arahana mba hampihetsika ny YouTube amin'ny sasany amin'ireo mpilalao haino aman-jery malaza sy konsole mampiasa youtube.com/activate
Fomba 1: Activate YouTube amin'ny Roku
Roku dia tsatokazo mivantana izay azonao ampifandraisina amin'ny fahitalavitrao sy amin'ny alàlan'ny Internet, fampitana mivantana, sarimihetsika, ary haino aman-jery hafa. Hampavitrika YouTube amin'ny Roku:
Voalohany, ampifandraiso amin'ny fahita lavitra ny lakandranon'i Roku. Hila fifandraisana Wi-Fi. Rehefa mifandray dia midira amin'ny kaonty Roku anao.
Ampidiro ny efijery an-trano amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Home amin'ny lavitra Roku anao.
Safidio ny Channel Store ary tsindrio ny bokotra OK amin'ny lavitra Roku anao.
Eo ambanin'ny Free Top, safidio ny YouTube ary tsindrio OK eo amin'ny lavitra anao.
Safidio ny safidy Add Channel ary tsindrio OK.
Rehefa mahavita ny dingana farany ianao dia hanampy YouTube ao amin'ny fantsonao. Raha te hanamarina ianao raha nampidirina soa aman-tsara ny YouTube na tsia, tsindrio ny bokotra Home amin'ny lavitra ary mankanesa any amin'ny My Channels. Ny fantsona YouTube dia tokony ho ao amin'ny lisitry ny fantsona.
Sokafy ny Channel YouTube.
Safidio izao ny kisary Gear hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny fantsona YouTube.
Safidio izao, Midira ary midira ny mombamomba ny kaonty Google / YouTube anao.
Roku dia haneho kaody 8-digit eo amin'ny efijery.
Mandehana izao amin'ny youtube.com/activate amin'ny solosainao findainao na telefaona ampiasainao ny fanamoriana.
Ampidiro ny fampahalalana momba ny kaonty Google anao raha tsy mbola niditra ianao ary nahavita ny fizotran'ny fidirana.
Ampidiro ao anaty boaty ny kaody valo isa izay asehon'i Roku ary fenoy ny fampahavitrihana.
Tsindrio Avelao ny fidirana raha mahita izany haingana ianao. Vitanao izao ny nanetsika ny YouTube tamina tsora-kazo Roku nampiasanao youtube.com/activate.
Raha manana Samsung Smart TV ianao, dia ho faly ianao mahafantatra fa manana ny iray amin'ireo fomba haingana indrindra hampiasana ny YouTube izy io. Hanao izany,
Atombohy ny fahitalavitra, ary alao antoka fa manana fifandraisana Wi-Fi miasa ianao. Sokafy ny fivarotana fampiharana Smart TV amin'ny Samsung TV.
Tadiavo ny fampiharana YouTube dia sokafy.
Ny fampiharana YouTube, rehefa nosokafana, dia hampiseho ny kaody fampandehanana valo isa amin'ny efijery fahitalavitra anao.
Sokafy amin'ny telefaona finday na solosainao ny browser-nao ary mankanesa ao amin'ny YouTube.com/activate. Hamarino tsara fa efa niditra an-tsokosoko tao amin'ny kaontinao Google / YouTube ianao alohan'ny handehananao.
Soraty ny kaody fampandehanana izay aseho amin'ny efijery Samsung Smart TV.
Tsindrio ny safidy manaraka.
Raha misy ny fanontanina haingana raha tianao ny hidiran'ny Samsung TV amin'ny kaontinao, mandroso avelao izany. Efa navitrika tao amin'ny Samsung Smart TV ianao izao.
Kodi (fantatra amin'ny anarana hoe XBMC) dia mpilalao haino aman-jery open source ary rindrambaiko fialamboly. Raha manana Kodi amin'ny fahitalavitra ianao dia mila apetrakao aloha ny plugin YouTube alohan'ny hampiasana ny YouTube amin'ny alàlan'ny youtube.com/activate. Ity misy torolàlana iray isaky ny dingana momba ny fomba hampiasana ny YouTube ao amin'ny Kodi:
Voalohany, tadiavo ny Add-on safidy ary apetraho eto: Repository / Get Add-ons.
Safidio ny Repository Add-on Kodi.
Ampiasao ny safidy Add-on Video.
Safidio ny YouTube ary kitiho ny fametrahana izao. Ny fizotry ny fametrahana dia mety maharitra iray na roa minitra vao vita. Ny fahazoana antoka ny fifandraisana Internet milamina dia atoro anao.
Vantany vao vita ny fametrahana dia mankanesa any amin'ny Kodi - horonan-tsary - Add-on - YouTube. Sokafy ny fampiharana YouTube.
Hahazo kaody fanamarinana valo isa eo amin'ny efijeryo ianao.
Sokafy ny pejy web www.youtube.com/activate na amin'ny solosaina na finday avo lenta.
Ampidiro ny kaody valo isa hitanao naseho.
Tsindrio ny bokotra Mandrosoa ho an'ny YouTube mba hamaranana ny fampandehanana an'i Kodi ao amin'ny YouTube.
Vakio ihany koa: Top 15 safidy YouTube maimaim-poana - Toerana horonantsary toa ny YouTube
Amin'ny maha-fepetra takiana anao dia tsy maintsy mampidina sy mametraka ny fampiharana YouTube amin'ny Apple TV ianao. Sokafy ny fivarotana fampiharana ary avy eo mitady ny YouTube, apetraho. Raha vantany vao vita izany dia azonao atao ny mampihetsika ny YouTube toy izao:
Mandrosoa ny fampiharana YouTube amin'ny Apple TV.
Mizaha mankany amin'ny menio fanovana azy.
Midira ao amin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny safidy omena ao amin'ny menio Settings.
Mariho ny kaody valo isa izay hasehon'ny Apple TV.
Tsidiho ny www.youtube.com/activate amin'ny smartphone na PC izay nidiranao tao amin'ny kaonty YouTube mitovy amin'ny Apple TV.
Soraty ny kaody valo nomarihinao, ary miroso amin'ny famitana ny activation.
Ny fampandehanana YouTube amin'ny Xbox dia dingana iray mahitsy. Tahaka ny amin'ny Apple TV, mila mampidina sy mametraka ny fampiharana YouTube aloha ianao amin'ny fivarotana app. Vantany vao manao izany ianao,
Sokafy ny YouTube amin'ny Xbox.
Mandehana miditra sy miditra
Safidio ny Midira ary tsindrio ny bokotra X amin'ny mpanara-maso.
Ny fampiharana YouTube dia hampiseho kaody valo isa. Na soraty izany na tazomy hisokatra ity efijery ity satria mila an'ity kaody ity ianao any aoriana.
Tsidiho ny pejin-tranonkala youtube.com/activate avy amin'ny solosaina findainao na telefaoninao. Tokony hiditra amin'ny kaonty YouTube mitovy amin'ny Xbox ianao. Raha tsy tafiditra ianao dia ampidiro ny fanamarinanao ary midira.
Raha miverina amin'ny pejy youtube.com/activate ianao dia ampidiro ao amin'ny Xbox ilay kaody valo-digit ary mandroso.
Raha mahita mailaka fanamafisana ianao mangataka fanamafisana raha maniry ny hamela ny fidiran'ny Xbox ao amin'ny kaontinao ianao dia tsindrio ny Avelao ary miroso.
Amazon Fire Stick dia mamela ny mpampiasa hitanjozotra avy amin'ny serivisy toa an'i Netflix, Amazon Prime Video, ary ankehitriny YouTube mivantana amin'ny fahitalavitrao. Mba hampavitrika ny kaontinao YouTube ao amin'ny Amazon Fire Stick,
Ao amin'ny lavitra Amazon Fire TV, kitiho ny bokotra an-trano
Mandehana any amin'ny fivarotana app Amazon.
Mikaroha YouTube ary apetraho.
Mety mila miditra amin'ny kaontinao YouTube ianao.
Mariho ilay kaody fampandehanana valo isa aseho eo amin'ny efijery na taomy hisokatra ny efijery
Tsidiho ny www.youtube.com/activate amin'ny alàlan'ny browser amin'ny laptop, desktop, na finday. Hamarino tsara fa niditra tao amin'ny kaontinao YouTube ianao talohan'ny nanohizanao.
Ampidiro eo amin'ny efijery TV ny kaody hitanao, ary mandroso. Raha mahazo bitsika ianao dia avelao ary hitohy.
Vakio ihany koa: Sakano ny YouTube rehefa voasakana any amin'ny birao, sekoly na kolejy?
PlayStation, na dia ahafahanao milalao lalao isan-karazany aza, dia ahafahanao mandefa haino aman-jery amin'ny alàlan'ny karazana rindranasa streaming ao amin'ny magazay fampiharana. Misy ihany koa ny YouTube, ary hampavitrika ny YouTube amin'ny fahitalavitrao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy amin'ny PlayStation, araho ny dingana eto ambany.
Sokafy ny fampiharana YouTube amin'ny PlayStation. Aza adino fa ny PlayStation 3 na taty aoriana ihany no tohana. Raha tsy apetrakao ny fampiharana dia sokafy ny fivarotana app ary ampidino izany.
Vantany vao nosokafanao ny fampiharana dia mankanesa any amin'ny Sign-in & setting.
Safidio ny safidy Sign-in.
Haneho kaody valo isa ny fampiharana YouTube ankehitriny. Mariho izany.
Ny Smart TV maoderina rehetra dia misy ny fampiharana YouTube tafiditra ao anatiny. Saingy, amin'ny maodely vitsivitsy, mila sintonina avy amin'ny app store aloha izany. Hamarino tsara fa napetrakao alohan'ny hanatanterahana ireto dingana ireto:
discord mic tsy mandeha aorian'ny fanavaozana ny windows
Sokafy ny fampiharana YouTube amin'ny fahitalavitra Smart.
Raha vantany vao nanokatra ny fampiharana ianao dia mandehana any amin'ny Settings.
Google Chromecast dia safidy tsara hizarana efijery na fandefasana haino aman-jery multimedia avy amin'ny fitaovana iray mankany amin'ny iray hafa. Ilaina indrindra izany raha te hijery zavatra amin'ny efijery lehibe kokoa ianao, toy ny fandefasana horonan-tsary amin'ny telefaona mankany amin'ny fahitalavitra. Raha sendra manana olana amin'ny fampiharana YouTube amin'ny fahitalavitra ianao dia azonao atao ny mametraka ny Chromecast ary ampiasao izany hijerena ireo horonantsary YouTube.
Hamarino tsara fa ny fitaovanao finday na ny takelaka tianao handefasana azy dia ao amin'ilay tamba-jotra Wi-Fi mitovy amin'ny Chromecast.
Sokafy ny fampiharana YouTube.
Tsindrio ny bokotra Cast. Hita eo an-tampon'ny efijery Home app.
Safidio ny fitaovana tianao alefa, amin'ity tranga ity, dia ho ny fahitalavitrao.
Misafidiana fandaharana amin'ny fahitalavitra na horonan-tsary.
Tsindrio ny bokotra Play raha tsy manomboka milalao ho azy ny horonantsary.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hampiasana ny maody maizina YouTube
Nofaraninay ny teknika azonao ampiasaina hampiasana ny YouTube amin'ny alàlan'ny youtube.com/activate. Raha nahatratra ny fiafarana maty paika ianao nandritra ny iray amin'ireto fomba ireto, dia azonao atao ny mamerina ny fahitalavitra anao, manamarina ary mamerina ny fifandraisana Internet ary manandrana mivoaka sy miditra indray miaraka amin'ny kaontinao YouTube. Google dia nanome antsika ny rendrarendra, ary miaraka amin'ny youtube.com/activate, azonao atao ny mankafy horonan-tsary marobe YouTube amin'ny efijery lehibe mipetraka eo ambony sezanao.
ny fomba fanovana nat type windows 10
tsy afaka manavao ny windows 1903
ny windows fanavaozana ny bara tsy mandeha
Windows 10 mpanonta printy dia diso fanjakana
hanafainganana usb transfer windows 10
mampifandray lisansa windows amin'ny kaonty microsoft